Qarax Sababay Dhimasho iyo Dhaawac oo ka dhacay Muqdisho. – SBC
Qarax Sababay Dhimasho iyo Dhaawac oo ka dhacay Muqdisho.
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa waxaa galabta lagu weeraray Hotel Jazeera oo ku yaala Degmada Wadajir Ee Gobolka Banaadir. Gaariga qaraxa lagu fuliyay waxaa la sheegay inuu ahaa nooca iska rogaha ay Somalidu u taqaano.
Qaraxaan oo ahaa mid si weyn looga maqlay qaybaha kala duwan ee Magaalada Muqdisho, ayaa dhaliyay uuro xoogan oo isu shareertay cirka, waxaana uuradaasi laga arkayaa Degmooyinka ka baxsan Degmadaasi Wadajir.
Ka hor inta aan la weerarin Hotel Jazeera oo xaalku uu ahaa mid degan, ayaa markeliya isu bedelay mid aad u kacsan, markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa si kedis ahayd loogu soo leexiyay albaabka hore ee Hotelka. Warar kalana waxay sheegayan in gaariga lagu dhuftay dhabarka dambe ee Hotelka, gaar ahaan wadada ka timaada dhanka Bangaariyada.
Qaraxaasi waxa uu burbur xoogan u gaystay Dhismaha Hotelka, waxaana muuqaalka Hotelkaasi ka muuqanaaya burbur, sida ay soo sheegayaan Suxufiyiin gaartay halkaasi.
Xeendaabka Hotel Jazeera, ayaa waxaa ku yaala dukaamo ganacsi oo ay lee yihiin ganacsato Somaliyeed, waxaana la soo sheegayaa in waxyeelo kala duwan ka soo gaartay qaraxaasi.
Illaa afar qof, ayaa waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi ku dhimatay, halka tiro kale oo intaasi ka badana ay ku dhaawacantay. Waxaana suurta gal ah in khasaaraha dhimashada uu tiradaa ka badan yahay.
In ka badan 10 qof, ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku dhimatay weerarkaasi, waxaa kaloo jira dad kaloo intaa ka badan oo dhaawacyo kala duwan uu ka soo gaaray qaraxaasi.
Suxufiyiinta, ayaa soo sheegaaya in gaadiidka gurmadka deg-degga (Ambulance), ay meydadka iyo dhaawacyaduba ka daabulayan Hotelka, iyagoo gaynaaya goobaha caafimaadka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska Gobolka Banaadir oo gaaray Hotelka Jazeera, ayaa waxay ridayan rasaas ay ku kala eryayaan dad shacab ah oo ku soo xoomay halkaasi.
Culeyska uu qaraxan lahaa, ayaa dadka reer Muqdisho waxa uu soo xusuusiyay weerarkii uu dhiigga badani ku daatay, ee Ururka Al Shabaab ku galeen Xaruntii Hargaha & Saamaha, oo ku taala Isgoyska KM4, muddo afar sano laga jooggo.
Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ku soo badanaaya weerarada ka dhanka ah Hoteelada ku yaala. Bishii Ramadan ayay ahayd markii weerar hubeysan lagu qaaday Hoteelada Siyaad iyo Wehliye, oo ku dhow Madaxtooyada Somaliya.